होटल क्षेत्रमै जम्दै गएर सेफ, हेड सेफ मात्र भएनन्, मास्टर सेफसम्म :सेफ थपलिया – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated Oct 25, 2020 67 0
०९ कात्तिक, काठमाडौँ । एउटा सफल व्यक्ति बन्न मानिसमा चाहना र धैर्यताको आवश्यक पर्दछ । यस्तै आफ्नो चाहनालाई पूरा गर्न गरिएको संघर्षबाट एक सफल व्यक्तिको पात्र बनेका छन् नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका-६ का नारायण थपलिया ।
उनी सामान्य परिवारमा जन्मेका थिए । एस.एल.सी को पढाई पश्चात आमाले दिएको चार सय रुपैयाँ साथमा लिएर सुनौलो भविष्य निमार्ण गर्न काठमाडौं प्रवेश गरेका थपलियाले सुरुमा केहि समय चावहिल स्थित शुभकामना पाईप फिटिङ् सेन्टरमा काम गरेका थिए ।
कामको शिलशिलासँगै उनले २०५४ सालमा क्लब हिमालय नगरकोटबाट ८ सय रुपैयाँ मासिक तलबमा मसाल्चीबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका थिए । उनले त्यहाँ पाँच बर्ष बिताए । करिब ५ वर्षको अनुभवपछि थपलियाले आफ्नो कामको निरन्तरता सँगै पार्क भिलेजमा काम गरे, र केही समयपछि र्याडिसन होटल लाजिम्पाटमा करिब एक वर्ष काम गरे ।त्यस पछि थपलिया होटल क्षेत्रमै जम्दै गएर सेफ, हेड सेफ मात्र भएनन्, मास्टर सेफसम्म भए ।
होटल क्षेत्रमा थपलियाले २४ बिताइसकेका छन् । २४ वर्ष लामो आफ्नो करियरमा थपलियाले देशमा १२ वर्ष र केमन आइल्यान्डमा ७ वर्ष र दुबईमा ५ वर्ष गरेर विदेशमा १२ वर्ष काम गरिसकेका छन् । उनले विश्वविद्यायलयमा सम्बन्धित विषयमा लेक्चरसमेत दिए । उनले युनिभर्सिटी कलेज अफ द क्यमनमा लेक्चरर गरेका छन् । उनको औपचारिक अध्ययन भनेको एस.एल.सी. मात्र हो । थपलिया एस स्कुल अफ टुरिजम एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट कोर्ष पुतली सडकमा पाक प्रशिक्षकको रुपमा काम गरी हालैबाट एक प्राचार्यको रुपमा काम गरीरहेका छन् ।यसैबीच तीन महिना अघि ग्यास्टोनोमी एसोसियन अफ नेपाल सेफ साथीहरु मिलेर स्थापना समेत गरेका छन् । यसै क्रममा विभिन्न संघ संस्थालाई सेफ साथीहरु मिलेर भोको पेट भएकाहरुलाई केही हद सम्म सहयोग भाग लिन पाउदा धेरै लागेको थपलिया बताउँछन् ।
यसैबीच विश्वव्यापी ग्यास्ट्रोनोमी पयर्यटनका लागी ग्रीक राजदुतबाट थपलिया टेस्ट फोर र ग्लोबल ग्यास्ट्रोनोमी २०२०/२०२१ बाट नेपालका लागि एम्बासेडरको रूपमा छनौट भएको छ । २०२१ को मे मा एथेन्समा हुने सम्पूर्ण देशका ग्यास्ट्रोनोमी एम्बेस्डर भेलामा नेपालको तर्फबाट थपलियाले पनि आफ्नो सहभागिता जनाउनेछन् ।
उक्त भेलामा नेपालको खाना परिकार बारेमा कुरा राख्न पाउने भएकाले उनी आफू हर्षित भएको बताउँछन् । थपलियाले होटल र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा औपचारिक अध्ययन नगरे तापनि थुप्रै अनौपचारिक तालिम लिएका छन् । उनले अनलाइन मार्फत रिसोर्ट व्यवस्थापन,होटेल व्यवस्थापन,हस्पिटालिटी टुडे एन्ड ईन्टरडकस्न एन्ड हस्पिटालिटी ल २०१६ बाट समेत अध्यन गरेका छन् उनले वल्र्ड मास्टर सेफ सोसाइटीबाट सर्टिफाइड मास्टरसेफसमेत हुन् ।
Corona UpdatesCoronavirusCOVID-19DashainDigital KhabarFestivalNepalNepali News
दाजुभाइमा तिहारको सम्झना